Faayila baafata foddaa kuusdeetaa. galfata kuusdeetaaf adda bahan qofatu tarreeffama.
Faayila, gaafata, unka, ykn gabaasa kuusdeetaa ammee olkaa'a. Faayila kuusdeetaaf, qaaqa faayila olkaa'ijedhu ni agarta. Wanta biraaf, qaaqa Olkaa'i jedhu agarta.
Faayila kuusdeetaa ammee maqaa biroon olkaa'a. Qaaqa faayila olkaa'i keessatti, olkaa'uuf xurree fi maqaa faayila filadhu.
Gabaasa ykn unka filame gara galmee barruutti alerga. Yeroo alerguu gabaasni jijjiiraman kan alergamu akka garagalcha qabeentaa kuusdeetaatti dha.
Ergaa-e erguuf fayyadama ergaa-e durtii bana. Faayilli kuusdeetaa ammee akka miiltootti miilteessu ta'a. Dhimma ergaa, fudhataa ergaa, fi qaama ergaa galchuu dandeessa.
Gabaasa akka Ergaa-e tti
Ergaa-e erguuf fayyadama ergaa-e durtii bana. Gabaasni filame akka miiltootti miilteessu ta'a. Dhimma ergaa, fudhataa ergaa, fi qaama ergaa galchuu dandeessa. Yeroo alerguu gabaasni jijjiiraman kan alergamu akka garagalcha qabeentaa kuusdeetaatti dha.
Gabaasa gara Galmee Barruutti
Gabaasa filame gara galmee barruutti alerga. Yeroo alerguu gabaasni jijjiiraman kan alergamu akka garagalcha qabeentaa kuusdeetaatti dha.